Man United oo Saddex rikoodh muhiim ah ka hor istaagtay Liverpool kaddib barbarihii ay ku galeen garoonka Old Trafford – Gool FM
(Manchester) 20 Oct 2019. Kooxaha Man United iyo Liverpool ayaa dhibacaha ku kala qeybsaday garoonka Old Trafford, kaddib markii ay ku kala bexeen barbaro 1-1 ah kulankoodii 9-aad horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.
Waxaa hakad ku yimid guulihii 8 kulan xirriirka ahaa ay ka soo gaartay kooxda Liverpool Premier League tan iyo bilawoga xilli ciyaareedka, Jürgen Klopp iyo wiilashiisa ayaa waxay isku lumiyeen 2-dii dhibcood ugu horreysay ee horyaalka.
Liverpool ma aysan gaarin rikoodhkii ay Manchester Ciy ka sameysay taariikhda horyaalka Premier League:-
Haa Liverpool ayaa guuleysatay 8 kulan oo isku xigta xilli ciyaareedkan ka hor kulanka Manchester United ay maanta ku kala bexeen barbaro 1-1 ah, laakiin Reds ayaa is dhaafisay fursad dahabi ah ay ku qaban kartay kooxda Man City.
17 kulan xirriir ah, 17 guul, waa rikoodh taariikhi ah ay sameysay kooxda Liverpool, waxayna kaalinta labaad kaga jiraan kooxda guulaha ugu badan ee xiriir ah gaartay taariikhda horyaalka Premier League, laakiin waxay talaabo oo kaliya u jeereen inay soo barbareeyaan rikoorka Manchester City ee ah 18 guul xiriir ah, laakiin tariinka Reds ayaa wuxuu ku istaagay garoonka Old Trafford.
Jose Mourinho iyo Chelsea ayaa sii joogi doona kooxda ugu sarreysa, iyagoo uga mahadcelinaya Manchester United:-
Kaddib markii ay Liverpool guuleysatay siddeed kulan oo isku xigta, waxay Jürgen Klopp iyo wiilashiisa hal kulan oo kaliya u jireen bilaabashada ugu fiican ee hal xilli ciyaareedka taariikhda horyaalka Premier League.
Kaddib babarihii ay maanta la galeen kooxda Manchester United, waxaa wali Chelsea uu hogaaminayey Jose Mourinho u diiwaan gashan rikoorka kooxda ugu bilaabashada fiican, kuwaasoo xilli ciyaareedkii 2005/2006 kaga daah furtay 9 guul oo xiriir ah.
Ole Gunnar Solskjær wuxuu ka hor taagan yahay rikoodh gaar ah dhiggiisa Jürgen Klopp:-
Tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu noqday macallinka kaliya ee horyaalka Premier League, kaasoo wajahay Jürgen Klopp in kabadan hal kulan, mana uusan kala kulmin wax guuldaro ah, waxaana uu ka haystaa 2 kulan, 2 barbaro ah.